Tag: kushambadzira vhidhiyo | Martech Zone
Tag: kushambadzira vhidhiyo
Tiri kukwirisa vhidhiyo yehupenyu yeumwe wevatengi vedu panguva ino. Vane toni yevashanyi vanouya kune yavo saiti, asi isu hatisi kuona vanhu vanonamira kwakanyanya kureba. Mutsananguri mupfupi chichava chishandiso chakanakisa chekutora kuti vawane kukosha kwavo uye kusiyanisa kune vashanyi vatsva nenzira inonakidza. Zvidzidzo zvinoratidza kuti mutengi kudiwa kwevhidhiyo zvemukati zvawedzera zvakanyanya, ne43% inoda kuona zvimwe
Mutsananguri Vhidhiyo pane Anotsanangudza Mavhidhiyo: Chisina Kukosheswa Chishandiso cheVashambadzi
Chitatu, November 27, 2013 China, August 20, 2015 Kelsey Washington
Nekutarisisa kwevatengi kunoramba kuripo pakuderera, vashambadzi uye mabrand vanofanirwa kutaurirana izvo, nei, uye sei pasina ruzivo rwakawandisa. Tsvagiridzo yakawana kuti mharidzo nemazwi nemifananidzo zvine 50% zvinonyanya kushanda kana zvichitaurwa neshoko. Saka nei mabhurandi akawanda achizadza peji ravo repamba nerunyoro chete? Cue iyo inotsanangudza vhidhiyo. Vatengesi veSavvy vanokoshesa nguva yevateereri vavo, uye vanoshandisa kutaurirana kunoonekwa, sevatsananguri mavhidhiyo, kuti vawedzere kunzwisisa kwevatariri. Kubudirira pano
Dhata-Inotengeswa Kushambadzira kuri Kupisa!
Mugovera, Mbudzi 9, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvimwe zvinonakidza zvakawanikwa kubva kuongororo yeBlueKai pamafambiro anotungamirwa nedata. Ini ndaifunga ichinyanya kufadza kufamba kwekukosha kana zvasvika kune akakosha muchinjiko-chiteshi / muchinjiko-chikuva mikana. Nepo kutsvagisa injini yekutsvaga kuchiri kuita kiyi, yakadonha zvakanyanya. Ini ndinotenda izvo zvinokonzerwa nekuvanda kweGoogle kwemazwi akakosha uye kuomesa kwavo algorithms kuuraya iyo SEO indasitiri. Vatengesi vadzokera kumashure kuti vatarise pamufananidzo muhombe pane izvo zvinokanganisa zvakanyanya pamari